Shirkii Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxda Dowlad Goboleedyada oo dib u dhac ku yimid | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Shirkii Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxda Dowlad Goboleedyada oo dib u dhac ku...
Shirkii Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxda Dowlad Goboleedyada oo dib u dhac ku yimid
Maanta oo Khamiis ah taariikhduna ku beegan tahay 10/9/2020 ayaa qorsuhu ahaa in xarunta Villa Soomaaliya ee Muqdisho in uu shir uga furmo Madaxweyne Farmaajo & Madaxda Dowlad Goboleedyada, hayeeshee la sheegay in shirkaasi uu dib u dhacay.
Warar soo baxaya ayaa waxaa ay sheegayaan in sababaha ugu weyn ee keenay in uu baqdo shirka ay tahay in xal laga gaaro khilaaf weli ka dhex jira Maamul goboleedyada qaarkood sida Puntland iyo Jubbaland iyo Madaxtooyada Soomaaliya.
Waxaa xalay sidoo kale baaqatay munaasabad casho ah oo loogu talo galay Madaxda Dowlad Goboleedyada,waxaana wararka ay intaasi ku darayaan in Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam uu sheegay in uu doonayo in la bilaabo tallaabooyinkii koowaad ee xal ka gaarista arrinta Gobolka Gedo.
Madaxweynayaasha Maamulada, Galmudug, Hir-Shabelle iyo Koonfur Galbeed ayaa shalay shir ku yeeshay Baydhabo, iyaga oo sheegay in aysan wax shuruud ah ku xireyn shirka uu ku casuumay Madaxweyne farmaajo, hayeeshee weli ay taagan yihiin caqado uu shirka la furmi la’yahay.
Wararka ugu dambeeya ee la helayo ayaa waxaa ay sheegayaan in Maalinta sabtida ah ee soo socota inay maqcquul tahay in uu furmo shirka u dhaxeeya Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxda dowladda, kaas oo looga hadli doono arrimaha doorashada Soomaaliya